Nanafika ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana tany New York niaraka tamin'ireo Mpitondra Eran-tany nijery hoe: "Aza misafidy ny ho lany tamingana! Inona no fialantsiny?"
Home » Lahatsoratra farany farany » Travel Travel » Nanafika ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana tany New York ny mpitondra eran-tany nijery hoe: “Aza misafidy ny ho lany tamingana! Inona no fialantsiny?
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • News sustainability • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nanafika ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana tany New York ny mpitondra eran-tany nijery hoe: “Aza misafidy ny ho lany tamingana! Inona no fialantsiny?
Aïssa Maïga nandrakitra ny feo ho an'ny dinôzôra sarimiaina amin'ny ordinatera izay aseho amin'ny sarimihetsika fohy vaovao ho an'ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana an'i Don't Choose Extinction mba hanairana ny saina momba ny fiovan'ny toetr'andro. Sary: Simon Guillemin
Niditra an-keriny tao amin'ny Efitrano Fivoriambe malaza, malaza amin'ny lahatenin'ny mpitondra manerana an'izao tontolo izao, ilay dinôzôra manaitra ny mpihaino amin'ireo diplaomaty sy olo-manan-kaja taitra sy sahiran-tsaina fa “fotoana nitsahatra tsy nanao fialan-tsiny ny olombelona ary nanomboka nanao fanovana” mba hamahana ny olana. krizin'ny toetrandro.
Sarimihetsika voalohany natao tao anatin'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana.
Ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana (PNUD) dia mitondra dinôzôra masiaka sy miresaka any amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana mba hanentanana ny hetsika momba ny toetr'andro bebe kokoa avy amin'ireo mpitarika manerantany,
Ao amin'ny sarimihetsika fohy natomboka androany ho ivon'ny fanentanana vaovao 'Aza misafidy ny ho lany tamingana' an'ny masoivoho.
“Farafaharatsiny nanana asterôida isika”, hoy ny fampitandreman'ilay dinôzôra, manondro ny teoria malaza manazava ny faharinganan'ny dinôzôra 70 tapitrisa taona lasa izay. “Inona no fialan-tsiny aminao?”
Ity horonantsary voalohany natao tao anatin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana ity tamin'ny fampiasana sary noforonin'ny solosaina (CGI) dia manasongadina ireo olo-malaza maneran-tany maneho ny dinôzôra amin'ny fiteny maro, anisan'izany ny mpilalao sarimihetsika. Eiza González (espaniola), Nikolaj Coster-Waldau (Danona), ary Aïssa Maïga (frantsay).
Ny dinôzôra dia manohy manasongadina ny maha-tsy mitombina sy tsy mitombina ny fanohanana ara-bola ho an'ny solika fôsily amin'ny alalan'ny fanampiana – volan'ny mpandoa hetra izay manampy amin'ny fitazonana ny vidin'ny arina, solika ary entona ho ambany ho an'ny mpanjifa – manoloana ny fiovan'ny toetr'andro.
“Eritrereto ny zavatra hafa rehetra azonao atao amin’io vola io. Miaina ao anaty fahantrana ny olona maneran-tany. Tsy heverinao ve fa ny fanampiana azy ireo dia misy dikany kokoa noho ny… mandoa ny famotehana ny karazam-biby misy anao?” hoy ny dinôzôra.
“'Mahafinaritra sy mahasarika ilay sarimihetsika, fa ny olana resahiny dia tsy mety ho matotra kokoa," hoy i Ulrika Modéer, Lehiben'ny Birao misahana ny Fifandraisana ivelany sy ny Fiarovam-pirenena ao amin'ny Pnud. “Nantsoin'ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana hoe 'code mena ho an'ny maha-olombelona' ny krizin'ny toetrandro. Tianay hampiala voly ny sarimihetsika, saingy tianay koa ny hanairana ny maha-zava-dehibe ny zava-misy. Tsy maintsy mandroso amin'ny hetsika momba ny toetr'andro izao tontolo izao raha te hahomby amin'ny fiarovana ny planetantsika ho an'ny taranaka ho avy isika."
Ny fampielezan-kevitry ny UNDP sy ny sarimihetsika 'Aza misafidy ny ho lany tamingana' dia mikendry ny hanome lanja ny famatsiam-bola amin'ny solika fôsily sy ny fomba fanafoanana ny fandrosoana lehibe amin'ny fampitsaharana ny fiovan'ny toetr'andro ary mitarika ny tsy fitoviana amin'ny fanasoavana ny mpanankarena.
Ny fikarohana nataon'ny Pnud navoaka ho ampahany amin'ny fanentanana dia mampiseho fa mandany 423 lavitrisa dolara amerikana isan-taona izao tontolo izao mba hamatsiana ny solika fôsily ho an'ny mpanjifa – solika, herinaratra ateraky ny fandoroana solika hafa, entona ary arina.
Mety handrakotra ny vidin'ny vaksiny COVID-19 ho an'ny olona tsirairay eto amin'izao tontolo izao izany, na handoa avo telo heny amin'ny vola ilaina isan-taona mba hamongorana ny fahantrana lalina eran-tany.
Ny fanentanana sy ny sarimihetsika dia manantena ny hahatonga ny olana indraindray sarotra sy ara-teknika mifandraika amin'ny Subsidies Fossil Fuel sy ny vonjy taitra momba ny toetrandro. Amin’ny alalan’ny hetsika isan-karazany asaina ny vahoaka, ny tanjona dia ny hanabe sy hanome feo ny olona maneran-tany.
Noforonina niaraka tamin'ny Activista Los Angeles (sampan-draharaha mahaforona nahazo mari-pankasitrahana maro), David Litt (mpanoratra ny lahatenin'ny filoha amerikana Barack Obama) ary Framestore (ny studio famoronana ao ambadik'i James Bond, Guardians of the Galaxy, Avengers End Game). Wunderman Thompson dia nanamboatra tontolo iainana nomerika ho an'ny fandraisana andraikitra hanomezana hery ny olona manerana izao tontolo izao handray andraikitra raha toa kosa ny Mindpool dia namokatra fitaovana fandraisan'anjaran'ny sampam-pitsikilovana iombonana ho an'ny sehatra fanentanana.
Ny PVBLIC Foundation, fikambanana tsy mitady tombombarotra manavao izay manetsika ny haino aman-jery, angon-drakitra ary ny teknolojia ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiantraikany ara-tsosialy manerana izao tontolo izao, dia manome fifandraisana stratejika sy fanohanana media. Ny marika kojakoja maharitra BOTTLETOP sy ny hetsika #TOGETHERBAND dia miara-miasa amin'ny Pnud ary hamokatra entana manokana miaraka amin'ny mpanakanto breziliana Speto mba hahazoana tombony amin'ny fanentanana.
Fantaro bebe kokoa momba ny fanentanana ao amin'ny www.dontchooseextinction.com